Xaqiiqda iyo Taariikhda Shirkadda Saab - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xaqiiqda iyo Taariikhda Shirkadda Saab
SAAB 96 de LUXE -63 CarlArne Eliasson Dalsland.
Magaca ereyga Saab oo ah magac loo soo gaabiyay Svenska Aeroplan Aktiebolaget (saamiga shirkada iswiidhishka ee dayuuradaha) ayaa dhidibadda loo taagay sannadkii 1937-dii.
* Sannadkii 1969 ayaa la abuuray shirkadda saamiga ee Saab-Scania, midaasina oo ka dhalatay isu-geeyntii shirkadihii saamiga ee Saab ee soo saari jirey waxyaabo ey ka mid ahaayeen dayuuradaha Jet-ka, xarumaha sal-dhigyada kombiyuutarrada, aaladaha casriga ee elektrooniigga iyo gawaarida Saab iyo shirkadda saamiga ee Scania-Vabis ee soo saarta gawaarida xamuulka, basaska iyo mashiinnada ku shaqeeya Diiselka. Xarunta maamulka saamiga shirkadda ayaa ku taala degmada Södertälje, halka warshadda gawaarida soo saartaana ku meelaysan tahay degmada Trollhättan.
* Sannadkii 1990 ayuu reerkii saamiga ugu badan lahaa shirkadda Saab Automobile ee Wallenberg uu bar ka iibiyay shirkadda gawaarida ee GM.
* Sannadkii 1990 ayay shirkadda GM dhammaan wada iibsatay shirkadda Saab, iyadoona sannad walba sannadka ka dambeeya uu kharash kaga lumi jiray, dhaqaale gaarsiisan 20 milyaard oo koron. Halka shirkadda Saab macaash laga helay oo keliya intii u dhaxeeysey sannadihii 1994 – 1995.
* Sannadkii ugu badnaa ayay shirkadda Saab iibisay gawaari dhan 133 000 oo gaari, sannadkii 2006. Halka sannadihii xigay ee 2008 iyo 2009 ay shirkaddu lumisay dhaqaale gaarsiisan saddex milyaardi oo koron sannadkiiba.
* Bishii feebaraayo ee sannadkii 2009 ayuu maamulkii shirkadda GM ku dhawaaqay in shirkadda gawaarida ee Saab gooni u istaagi doonto, kadibna la iibin doono. GM ayaa sheegtay xilligaa in aanay shirkaddu diyaar u ahayn sidii ay ku maal-gelin lahayd shirkadda Saab, islamarkaana suuq-geeysay, iyadoona taageero ka heshay dawladda iyo maamulkii shirkadda.
* Feebaraayo sannadkii 2010 ayaa shirkadda gawaarida ee Spyker iibsatay shirkadda Saab Automobile, iyadoona shirkadda GM ay iibkaa ku yeeshay iney shirkadda saami ku yeelato gaarsiisan 326 malyuun oo doolar.
* Bishii abriil ee sannadkan ayay shirkadda Saab la soo gudboonaadeen caqabado dhaqaale darro, middaasina oo adkeeysay in shirkaddu bixiso dhaqaalihii shirkadaha qalabka baabuurta u sameeya. Ra’sumaale Vladimir Antonov ayaa sheegay inuu damacsan yahay siduu shirkadda ku badbaadin lahaa ballan qaaday inuu ka iibsado daaraha warshadda. Dawladda Iswiidhen ayaa qalinka ku duugtay. Halka bankiga maal-gelinta Yurub uu shuruudo adag oo aaney shirkaddu ka bixi karin hor dhigay. Xaaladan shirkaddu ku sugan tahay ayey culimo badani qiyaasayaan in ay shirkadda ku dhici doonto busaarad.
* Shirkadda Saab Automobile ayey ka hoowl-galaan shaqaale gaarsiisan 4 000 oo ruux, kana hoowl-gala shan magaalo – magaalada Rüsselsheim ee Jarmalka, Nyköping, Istockholm, Gothenburg iyo Trollhättan.
DIB-U-HABEEYN lagu sameeyo shirkadda ayuu macnaheedu yahay in la siiyo wakhti ay shirkaddu dib isugu habeeyn karto, waxna uga badasho hab-howleedkeeda iyo kan dhaqaale. Xilliga dib-u-habeeynta ay shirkaddu ku jirto ayaa inta badan waxaa ka mid ah in shirkaddu bixiso qaar ka mid ah deeymaha lagu leeyahay. Muddadaasina oo aanay shirkaddu dalban karin in la qiimeeyo ama busaarad la geliyo. Halka xilliga dib-u-habeeynta ay shirkadaha qalabka u sameeyn jiray Saab ay tahay iney sugaan deeymahooda.
Maxkamadda degmada ayaa go’aamisa in shirkad, loo siiyo ogolaansho dib-u-habeeyn.